Iarahan’ny Pro Rossy sy ny Mi’Ritsoka : ho goavana no ho ny ngeza ny sehon’ny tarika Rossy | NewsMada
Iarahan’ny Pro Rossy sy ny Mi’Ritsoka : ho goavana no ho ny ngeza ny sehon’ny tarika Rossy
Matotra, tsara karakara, hany ka mipoaka sy “mitapôlaka” hatrany ny fampisehoana ataon’ny tarika Rossy. Tsy ho latsa-danja amin’izany ny amin’ny alahady izao, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina, fa hihoatra lavitra mihitsy aza, araka ny fampanantenan’izy ireo.
Efa ela no niandrandra fatratra ny hisian’ny fiaraha-miasa na ny Mi’Ritsoka Production na i Rossy. “Anisan’ireo tarika nikolokolo ny fahatanorako ry Rossy ary raha mbola nisy ny fampisehoan-dry zareo, tonga hatrany aho”, hoy Randriamampianina Hery, talen’ity trano famokarana ity. Ankehitriny, nifanojo izany fanirian’ny roa tonta izany ka hamokatra seho goavana, mihoatra lavitra amin’izay hita hatramin’izay.
Araka ny nambarany hatrany, itambaran’ny Pro Rossy sy ny Mi’Ritsoka ny fikarakarana sy ny fanatontosana io hetsika, amin’ny alahady tolakandro, io. Ao anatin’izany ny fanamafisam-peo, izay samy matanjaka sy manaraka ny toetrandro ary mahafehy tsara ny seho anaty efitrano lehibe toy itony. Antenaina, araka izany, fa hanome fahafaham-po ny mpankafy izao fiaraha-mientana izao.
Mikasika izay fanolorana ny kanto sy ny mendrika izay indrindra, hizara roa ny fampisehoana.
Hiram-pitiavana ho an’ny fetin’ ny mpifankatia…
Mifanojo amin’ny fahantomoran’ny fetin’ny mpifankatia moa io 11 febroary io. Noho izany, ho feno ireo hiram-pitiavana nahafantarana ny tarika Rossy hatramin’izay ny ampaham-potoana voalohany.
Aorian’izay, hiverina hiaina indray ireo fety sy fanentanana ary indrindra, hira manentanentana sy mampihetsiketsika, nampiavaka ny tarika hatrany am-boalohany, ny mpijery. Ho hafakely! Tsy hisy fetra voafaritra mialoha io fampisehoana io fa miankina amin’ny fankafizana sy ny fangatahan’ny olona ho tonga eny an-toerana, araka ny nambaran’ny mpikarakara hatrany.
Tsara ny manamarika fa tafiditra indrindra amin’ny fanamarihana tsingerintaona roa sosona ity seho ity: ny faha-10 taona niorenan’ny Mi’Ritsoka Production sy ny faha-30 taon’ny tarika Rossy. Mbola hisy ny hetsika tsy hampoizina ho fanohizana io fankalazana io ho an’ity trano famokarana ity. Hitohy etsy amin’ny Coliséum, amin’ny volana mey, arahina fitetezam-paritra, hatrany Frantsa, kosa ny fandaharam-potoan-dry Rossy.